Ireo rindranasa Android dimy tsara indrindra hanaovana antso an-tsary | Androidsis
amin'izao fotoana izao ny fahafahany miantso video dia tsotra kokoa noho ny hatramin'izay. Na dia eo am-paniriana hanao azy ireo amin'ny finday Android aza izany dia mila fampiharana izay manamora izany isika. Ny ampahany tsara dia ny fananantsika safidy maro azo omena antsika izay ahafahana manome izany fahafaha-manao izany. Tsotra be ny fanaovana afaka manao antso an-tsary.
Noho izany, eto ambany izahay mamela anao a fifantenana rindranasa ho an'ny Android izay ahafahantsika miantso video. Safidy maromaro, izay angamba fantatrao matetika, saingy manamora kokoa ho antsika ny manao antso an-tsary amin'ireo namana sy fianakaviana.
Ireo rindranasa rehetra horesahintsika manaraka ireo misy ao amin'ny Play Store. Ka ho tena tsotra ny misintona azy ireo amin'ny findainao Android. Fampiharana inona avy no nahatonga ny lisitray?
Google dia manana rindrambaiko manokana natao hanamorana ny antso an-tsary eo anelanelan'ny fifandraisana. Na dia tsy ny avo indrindra aza ny lazany dia safidy tsara tokony hodinihina. Misongadina izy amin'ny maha-tsotra indrindra an'ireo rindranasa rehetra amin'ity sokajy ity izay ho hitantsika. Volavola tsara, miaraka amina interface intuitive izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy. Manana fiasa amin'ny fampiharana izahay izay ahafahantsika mahita ny ataon'ny iray hafa alohan'ny hamaliana ilay antso.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izany, toy ny mahazatra ao amin'ny rindranasa Google, tsy manana fividianana na doka ao anatiny izahay.
Anarana mety ho toa anao. Faharoa hitantsika izany fampiharana antso an-tsary tsotra, izay hahafahantsika mifandray amin'ny namana sy fianakaviana amin'ny fomba tena mahafinaritra. Amin'ny alàlan'ny rindranasa dia afaka hiresaka resadresaka amin'ny olona isika, ary koa antso an-tsary. Ireo no fiasa omeny antsika. Tsy hoe io no fampiharana feno indrindra, fa manana iraka mazava be, dia ny fanamorana ny antso an-tsary. Inona koa, mifanaraka amin'ny karazana tambajotra rehetra (2G, 3G…) izay mahatonga azy io ho safidy tsara raha any amin'ny faritra tsy dia mifandray ianao na miaraka amin'ny tamba-jotra ratsy kokoa.
fiantsoana video sy fandefasan-kafatra anao
Iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ireo mpampiasa Android hifandraisana hatrany amin'ny namana sy fianakaviana. Noho io dia afaka manoratra resaka amin'ny chat isika, manao antso an-tsary ary milalao mihitsy aza amin'ilay olona ifampiresahantsika, izay mahatonga azy io ho feno. Ny traikefa amin'ny horonan-tsary amin'ny fampiharana dia tsara, manao antso ho tena mora izy, ary tsara ny kalitaon'ny sary amin'ny ankapobeny. Raha manana kaonty amin'ny tambajotra sosialy ianao dia dingana lozika ho anao ny mampiasa an'ity rindranasa ity.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika.
Ao anaty lisitra toy itony dia tsy ho diso anjara ianao ny fampiharana malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny antso an-tsary. Maro aminareo angamba no manana Skype napetraka ao amin'ny solosaina. Saingy, manana kinova misy ihany koa izahay amin'ny finday Android. Ny fiasan'ity rindranasa ity dia mitovy ary hanome antsika ny fahafaha-mifandray amin'ny namana sy fianakaviana izany. Manana isika resaka an-tsoratra, antso an-tsary ary antso an-tsary misy amin'ny fampiharana. Noho izany dia mora ny mifandray amin'ireo olona rehetra ireo.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity app ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay. Soa ihany fa tsy doka manelingelina na manafika ireo, noho izany dia tsy misy fiantraikany amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ny fampiharana.
Mamita ny lisitra amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra amin'ireo mpampiasa amin'ny telefaona Android izahay. Araka ny fantatrao, miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, nampidirina ho mpikambana ao amin'ny fampiharana, izay fananan'ny Facebook ankehitriny. fantatro nampiditra antso sy antso an-tsary tao amin'ilay app izy ireo. Noho izany ny fifandraisana amin'ny namana dia mora kokoa noho ny hatramin'izay noho izany. Ny interface an'ny antso an-tsary ao amin'ny app dia tsotra sy ahazoana ampiasaina, noho izany dia tsy hanana olana ianao amin'ny fampiasana azy. Ka mety ho safidy tsara dinihina, indrindra raha mampiasa matetika ny fampiharana ianao dia io no fomba mivantana indrindra hifandraisana amin'ireo namana sy fianakaviana nefa tsy mametraka zava-baovao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ao anatiny dia tsy manana fividianana na dokam-barotra isan-karazany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hanaovana antso an-tsary
Super Idle Cats dia mpanindry tsara ahafahana manao sakafo ankafizin'ny saka: voankazo isan-karazany
GALAK-Z: Variant Mobile manampy singa amin'ny ady amin'ny habakabaka RPG sy MECHS